ညီနေမင်း: သိသင့်တာနှင့် အဖြေများ
Dennis Martin : Before Agape he got one Virus i also got likeathat virus at the time i also i can't run Antivirus App If i run ,virus close Anti Virus App may be same problem at the time my computer is toooo much slow so i make with Avril Premium i can't found any virus than i take kasparsky from one of my Russia friend, i run with that but i can't find any virus . so after i use Norton 2010 from your web after i find alot of virus now is everything is OK but some time if i don't use any program my Processor is running around 100%. i think some thing wrong so i hope you will help me I'm waiting with Team Viewer By the way if you need some program & info you can go to this link i got from my Russia friend they use from those link some app are only Russia language .web page တွေကို Page လိုက် translate လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Program လေးလဲလုပ်ပေးပါဦး
(၁) window operation system မှာ antivirus program ကို တစ်ခုထက်ပိုပြီး မသုံးသင့်ပါဘူး microsoft ကလဲ အဲ့ဒီ့အကြောင်းကို သတိပေးထားပါတယ် . ကိုသဘောကျ နှစ်သက်တဲ့ anti virus program တစ်ခုခုကို သုံးပါ . ကျွန်တော်ကတော့ kaspersky 2010 ကိုသုံးပါတယ် . လူသုံးလဲများ တဲ့အပြင် security ဖက်ပိုင်းနဲ့ တစ်ခြားအားသာချက်တွေမှာ kaspersky က နံပါတ်(၂) နေရာမှာ နေရာယူထားပါတယ် .
(၂) နောက်တစ်ခုက processor က 100% ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပြီးသုံးနေစဉ်အတွင်း program ကို ၂ ခု လောက်ပဲဖွင့်ပါ မလိုအပ်ပဲ program တွေလဲ ၄-၅ ခု ဖွင့်ထားမယ် . သီချင်းလဲနားထောင်မယ် . တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ virus စစ်နေမယ်ဆိုရင် 100% ပါ ကျော်ချင်ကျော်သွားနိုင်ပါတယ် . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်ခုသတိထားစေချင်တာက virus program တစ်ခုခုနဲ့ full scan စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖွင့်ထားသမျှ program တွေကို ပိတ်မယ် . Download လုပ်ထားတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားမယ် . ကွန်ပျူတာကို အားလုံးအနားပေးထားတဲ့ အချိန်ကျမှ virus စစ်ပါ . လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန် virus မစစ်ပါနဲ့ . လုပ်ငန်းကျန့်ကြာစေတဲ့အပြင် လုပ်ငန်းတွေ မတန်တဆ ခိုင်းထားခြင်းဖြင့် cpu ရဲ့ heat လဲ တက်လာနိုင်ပါတယ် . ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါ .
(၃) နောက်တစ်ခုက WEBSITE (အခြားဘာသာများဖြင့်ရေးသားထားတဲ့) တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆိုက် ကို သွားလိုက်ပြီးတော့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ language ကနေ ကိုလိုတဲ့ language အမျိုးအစားကို ရွေးလိုက်ပြီး translate လုပ်လိုက်ပါ .
Posted by ညီနေမင်း at 11:01 AM
wannawin November 18, 2011 at 5:21 AM
အစ်ကို win32 virus ကိုဘယ်လိုသတ်ရမလဲ mail ပို့ပေးပါဦး